Ogaden News Agency (ONA) – Carl Bildt wasiirka Arrimaha Dibada Sweden Siyaasi Maahan- TV-yada Sweden oo si wada Barnaamijyadi Ogadeniya
Carl Bildt wasiirka Arrimaha Dibada Sweden Siyaasi Maahan- TV-yada Sweden oo si wada Barnaamijyadi Ogadeniya
TV-yada SVT ayaa wali wada ololaha ay ku baadi goobayaan xaalada Dhulka Ogadeniya waxaana barnaamijyadii ugu danbeeyay ee kabaxa TV-yadaas ay bilaabeen inay Madaxda Wadanka Sweden Soo fadhiisyaan Doodaha iyaga oo ku eedeynaya inay qeyb ka yihiin dhibaatada Ogadeniya ka jirta.
Barnaamijka Agenda ayaa waxa la horkeenay Wasiirka Arrimaha Dibada ee Wadanka Sweden Carl Bildt oo su aalo aad u adag oo xasaasi ah laga weydiyay Xaalada Dhulka Ogadeniya iyo Tacadiga gumeysiga Ethiopia.
TV-ga ayaa shirkada Lundin eedeymo ku aadan usoo jeediyay Wasiirka oo ah laftiisu nin qeyb ka ah shirkadaas.
Wasiirka ayaa halkaas codsi soo gudbiyay uu ku codsanayo inaan la eedeyn taliska Ethiopia. Waayo Ethiopia waa mustaqbalka eegana haddii ay soo daayeen labadi wariye inaan wax ka sheegno maba habona.
Journalada Wadanka Sweden
Ereygaas kasoo baxay Carl Bildt ayaa Joornalada kasoo baxa wadanka Sweden boggaga ugu horeeya lagu soo daawacay iyada oo aad loo eedeyay wasiirka. Wargeyska Metro ee aadka loo aqristo ayaa dhaliil xoogan iyo canbaareyn saaray wasiirka arrimaha dibada. Waxa uuna Journaalkaasi sheegay in Carl Bildt uusan aheyn nin Siyaasi ah lakiin uu yahay Ganacsade.
SVT 2 ninka ay wareysteen maahan Wasiirka Arrimaha Dibada ee Sweden. Waa Ganacsadihii hore aynu niqiinayninka ka hadlay Programka Agenda. Wargeyska ayaa hadalkiisi u turjumay Carl Bildtiyow waynu wada ognahay Shidaalka Ogadeniya waa qandaraaska mustaqbalka ay shirkada Lundin qaadan doonto.
waregsyada wadanka Sweden ayaa dhulka la dhacay sumcada Wasiirka arrimaha Dibada ee Sweden iyaga oo sheegay in hada ahmiyad aysanba laheyn Wasaarada arrimaha Dibada ee wadankaas.
TV-yada Sweden iyo saxaafada wadankaas ayaa Baraamijyo taxano ah oo ku aadan dhulka Ogadeniya waayadanba ka socdeen midaas oo gashay siyaasadi Wadanka oo doodo badan ka dhalisay lugta ay ku leedahay xubno kamid ah dowlada oo la sheegay inay shirkadaha Shidaalka Lundin ay xidhiidho la leeyihiin.
ONA kala soco kolba waxii ka soo kordha barnaamijyadaas.
Hoos waxaad ka daawan karta Filimki Barnaamijka Agenda ee laguwareystay Carl Bildt Wasiirka Arrimaha Dibada Sweden.
wareysigi Agenga Carl Bildt <<GUJI HALKAN>>